Mudaharaad ka dhacay Jaamacada Hargeisa. | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Somaliland, WARARKA	> Mudaharaad ka dhacay Jaamacada Hargeisa.
Sunday, December 26, 2010 Laaska News
Hargeisa.Wararka laga helayo Hargeysa ayaa waxay sheegayaan in shalay uu mudaharaad ka dhacay Jaamacada horteeda,mudaharaadkaas oo ay sameeyeen ardada ku jirta Jaamacada kagana soo horjeedaan badal lagu sameeyay hogaankii jaamacada iyo magacaabista hogaan cusub oo la sheegay inuu magacaabay madaxweyne Siilaanyo.
Waxaa kaloo lasheegay in uu ardadaa lahadlay Wasiirka Arrimaha Gudaha Dr.Gabose,kana balan qaaday in uu cabashadooda gaarsiinayo madaxweynaha,sidaan ku kala diray.
Waxaa kale oo warbaahintu sheegtay in galbnimadiina uu mid kale dhacay,walaw aanay kala cadayn waxa sababay kaa dambe,inuu yahay mid daba socda kii hore mise waa mid lagaga soo horjeedo.
waxa kale oo warku inta ku daraya in koox kale ay soo baxeen oo ardada ah sheegayana in dad banaanka laga soo abaabulay ay rabshadahan wadaan ee ay raali ku yihiin hogaanka cusub,ayna qaabileen madaxda sare iyo madaxweyne kuxigeenka Seylici.
Waxaa kale oo intaa dheer in xukuumadu ay balan qaaday Amniga lana furayo Jaamacada.
Hadaba waxaa is weydiin mudan haddii ay arrintu sida kor xusan ay tahay ma haboon tahay in lays weydiiyo su’aalahan soo socda:
1.Maxaa keenay in ardaygu ay umudaharaadaan Gudoomiye ama Hormuud labadalay ileen macalin maado ubixinayay lagama badaline?
2.Kacdoonka ardada ma gudaha jaamacada ayuu ka socdaa mise banaanka?
Wasaarada Waxbarashadu raali maka tahay badalkaa?
3.Macalimiinta iyo hogaanka labadalay mawada socdaan?
4.Hogaanka cusubi makamid ahaayeen Jaamacada mise banaanka ayaa laga keenay?
5.Hogaanka cusub haddii aan macalimiintu raali ka ahayn maxaa ka iman kara?
6.Ardada iyo Macalimiintu hogaanka cusub iyo hogaankii la badalay ma kala taageersan yihiin mise hal dhinac bay taageersan yihiin?
7.Hogaanka labadalay halis ma ku yahay xukuumada talada haysa,mise waa ku mucaarad?
Intaa kadib waxa la ogaanaya laba miduun ama kuu cadaanaysa in jaamacadaasi ay dawladda wax soo magacaabaysa aanay gacanta ugu jirin iyo inay ugu jirto.
Haddii ay cadaato in diidanaantu badato Hogaankii hore ma loo dayn karaa?
Labada Hogaanba meesha malaga saari karaa oo hogaan 3aad ma la magacaabi karaa?
Si kastaba ha ahaatee xukuumada Siilaanyo su’aalaadkaa haloo gudbiyo si ay xalkooda ugu darsadaan.
Madaxweynaha DJibouti oo Sheegay inuu Doorashada usoo istaagaya iyo Xibiga RPP Daawo VIDEO Muqdisho – Jaamacadda Carabta oo sheegtay in ay dhiseyso wasaaradaha DowladdaSAWIRRO